Iifowuni zeVenkile yeApp App | Martech Zone
Izibalo zeeVenkile zeApple
NgeCawa, nge-20 kaJanuwari 2019 NgeCawa, nge-20 kaJanuwari 2019 Douglas Karr
Ukuphuculwa kwezicelo zeselfowuni kunye nokuziphatha komsebenzisi kweapps kuyaqhubeka nokutshintsha kule minyaka idlulileyo. Izakhelo zesicelo esiphathwayo zivula iingcango zeenkampani zokunyusa ukubandakanyeka kwabasebenzisi kunye namava ngaphaya kwesikhangeli sewebhu ngaphandle kokophula i-bhanki. Abasebenzisi beselfowuni balindele amava aphezulu osetyenziso kwaye, xa besenza njalo, bazibandakanya ngokunzulu neempawu eziphumelela ingqalelo yabo.
Umndilili weapps yomsebenzisi osetyenziswayo kwi-18 ukuya kuma-24 uchitha iiyure ezili-121 ngenyanga esebenzisa usetyenziso lweselfowuni kunye neethebhulethi.
Imidlalo iyaqhubeka ukukhokela lonke olunye udidi kukhuphelo, nge-24.8% yazo zonke ii -apps ziyimidlalo. Ukusetyenziswa kweshishini kukude okwesibini, nangona kunjalo, kune-9.7% yazo zonke izinto ezikhutshelweyo. Kwaye, imfundo lelona candelo lesithathu lidume kakhulu nge-8.5% yazo zonke izinto ezikhutshelweyo.
Ulwazi olongezelelekileyo lwesitolo seapps:
Amazon ikhokelela kuzo zonke iiapps zeselfowuni ngemillennials, nge-35% isebenzisa usetyenziso.
Abasebenzisi be-Smartphone basebenzisa umndilili we 9 izicelo mobile imihla ngemihla.
Nazi 7 yezigidi zeapps iyafumaneka phakathi kweGoogle Play, iVenkile yeApple yeApple, kunye neqonga lesithathu lesoftware.
Kukho malunga nama-500,000 usetyenziso lwabapapashi kwiVenkile yeApple yeApple kwaye phantse i-1,000,000 kwiVenkile yeGoogle Play.
Nganye kwezi zibonelela ngamashishini. Imidlalo inokubonelela ngababukeli ababandakanyeke kakhulu ukuba babhengeze kwaye bakhe ulwazi ngayo. Ii -apps zeshishini zinokonyusa ukuzibandakanya kunye nexabiso kunye nabathengi bakho. Ii -apps zemfundo zinokwakha ukuthembeka kunye nokuzithemba ngethemba lakho.
Le infographic evela Izisombululo ze-ERS IT, Ivenkile yeeVenkile kwiNombolo: Ushwankathelo lweNtengiso, inikezela ngeenkcukacha-manani eziphambili ekukhuleni, kwinzuzo, nasekusebenziseni ii -apps zeselfowuni kunye neqonga labo- Ivenkile yosetyenziso yeApple, Google Play ye-Android, kunye Ivenkile yosetyenziso yeAmazon.
Ukuqokelelwa kwamatyala eCommerce Startups: Isikhokelo esichazayo
Ungazongeza njani iiBanners zeeApp kwiSiza sakho esiSelfowni